Tag: dagaal | Sagal Radio Services
Dagaal u dhexeeya ciidamada dowlada iyo Alshabaab oo ka socda duleedka Balcad
Ciidamada dowladda oo dib ula wareegay deegaanka Toora Toorow
Sagal Radio Services • News Report • May 27, 2016
Ciidamada dowladda iyo AMISOM ayaa shalay la wareegay deegaanka Toora Toorow ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo fariisin u aheyd Al-Shabaab, iyadoo howl galkan la sheegay inuu qeyb ka yahay kuwo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose.
Dagaal khasaare geystay oo ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray degmooyinka ka tirsan gobolka Gedo
Waxaa caawa degan xaaladda degmooyinka Garbahaareey iyo iyo Balad-Xaawo oo dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada Dowladda iyo xoogag ka tirsan ururka Al-Shabaab, iyadoo xaaladdu sideedii hore ku soo noqoneyso.
Faah faahin ka soo baxaya diyaarad ay leedahay Kenya oo ku soo dhacday duleedka Kismaayo
Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay ku soo dhacday agagaarka magaalada Kismaayo, kadib markii ay duqeyn ka geysatay agagaarka magaalada Jamaame.
Dagaal culus oo dhex maray Ciidamada DFS,AMISOM iyo kooxda Al Shabaab oo dhinac ah iyo Khasaaro ka dhashay.
Warka naga soo gaarayo Deegaanka Siinkadheer ee duleedka Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in Dagaal xoogan uu halkaasi ku dhex maray Ciidamada DFS oo garabsanaayo kuwa AMISOM iyo kooxda Al Shabaab oo dhinac ah.
Dagaal culus oo Al-shabaab iyo ciidamada Liyu Polis ku dhexmaray Soohdinta
Dagaal culus oo u dhexeeyay ciidanka deegaanka is-maamulka Soomaalida Itoobiya iyo xoogagga Al-shabaab ayaa tan iyo xalay ka socday soohdinta ay gobolka Bakool ka wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya.
Dagaal ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray tuulo ka tirsan degmada Buur-dhuubo
Wararka ka imaanaya degmada Buur-dhuubo ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu saakay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray Tuulo 15-KM u jirta degmadaas, halkaasoo ay weerareen ciidamada dowladda.
Dagaal ka dhacay Buurdhuubo iyo Nabadoon lagu weeraray Beledxaawo
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamada Itoobiya ee AMISOM, kuwa dowladda iyo Al-Shabaab uu ka dhacay duleedka degmada Buur-dhuubo, halkaasoo horay lagala wareegay Al-Shabaab.
Dagaallo Khasaare dhaliyay oo ka dhacay deegaanno ka tirsan Gobolka Bay
Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay iska-horimaadyo kala duwan oo ka dhacay gobolka Bay, kuwaasoo u dhexeeay ciidanka dowladda Somalia oo kaashanaya kuwa AMISOM ee ka socda Itoobiya iyo xoogagga Al-shabaab.
Dagaal qasaare geystay oo ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex maray degmada Balcad
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda uu ku dhex maray degmadaas, iyadoo la soo sheegayo in dagaalka uu geystay qasaare ballaaran oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Isku dhac laga cabsi qabo in ay ka dhacaan qeeba ka mid ah gobalka Gado iyo Ciidama kala taabacsan Dowlada iyo maamulka Juba oo isku horfadhiyo Gobalkaasi.
Abaanduulaha ciidamada Ahlusunna Waljmaaca ee gobolka Gedo, Cismaan Sheekh Cabdi ayaa sheegay in magaalada Balad-xaawo ay ka jirto xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidamo ka tirsan maamulka Jubba iyo kuwa ahlu suna iyo dowlada ee mudooyinkan gacanta ku hayey degmadaas.
Dagaal dhimasho sababay oo xalay Balad-weyne ka dhacay
Sagal Radio Services • News Report • February 1, 2013
Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo maleeshiyada al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe ka dhacay fariimo ku yaalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.